मोदीले कस्तो अर्थव्यवस्था खोजेको ? टोयोटावाली वा पकौडावाली «
मोदीले कस्तो अर्थव्यवस्था खोजेको ? टोयोटावाली वा पकौडावाली
नयाँ दिल्ली-भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेक इन इन्डियामा जोड दिँदै आएका छन् । टोयोटा मोटर कर्पोरेशनले कारलाई ड्रग्स वा रक्सीको रुपमा नहेर्नका लागि आग्रह गरिसकेको छ । टोयोटाका अनुसार भारतमा कारमा व्यापक कर लाग्ने गरेको छ ।
तर, कारको उच्च करसँग सम्बन्धित चिन्ता हटाउनुको सट्टा सरकारले यसलाई जन सम्पर्क मुद्दा बनाएको छ । एक मन्त्रीले ट्वीटर पोष्टमा टोयोटाले भारतमा लगानी नगर्ने विषय गलत भएको बताएका छन् ।
वाहनको आकार र इन्जितको क्षमताको आधारमा भारतमा कारमा १ देखि २२ प्रतिशत अतिरिक्त विलाशी कर लाग्छ । यसका कारण विश्वकै चौथो ठूलो कार बजारमा कारमा लाग्ने कर व्यापक मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ । केही एसयूभी सवारीमा कर बढेर ५० प्रतिशत सम्म पुगेको छ ।
ब्लूमबर्गको एक ताजा रिपोर्टमा भनिएको छ कि सरकार ६ वर्षदेखि हेडलाइन म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । चाहे त्यो नोटबन्दी होस् वा जीडीपीमा गिरावटको आंकडा, सरकारले सबै ठीक छ भन्ने देखाउन कुनै कसर छोडेको छैन । यो देखावटी आंकडा जति लामो समय चल्छ, महामारीपछि विकास दर ५ प्रतिशत तल झर्ने खतरा पनि त्यत्तीकै बढेर गएको छ ।
मेक इन इंडियालाई बढावा दिनका लागि स्टील र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको आयात शुल्क बढाउन सकिन्छ । यसबाट कार झनै महँगो हुन सक्छ । यसले कारको बजार झनै घट्न सक्छ ।